Rainier Valley – Taariikhda Yar oo Kooban - HistoryLink.org
Rainier Valley – Taariikhda Yar oo Kooban
Xaafada Rainier Valley ee Seattle waa xaafad iyo muuqaal juquraafiyeed labadaba. Waa dooxo aan aheyn, biyo-mareen laakiin ah dhul hoose oo u dhaxeeya laba taag, waxay gaadhaysaa ilaa toddoba mayl koonfur-bari laga soo bilaabo suuqa hoose ee Seattle ilaa Lake Washington. Xaafad ahaan, “Rainier Valley” waxa inta badan lagu tiriyaa qaybaha waqooyi iyo badhtanka ee dooxada, laakiin magaca marmarka qaar waxa loo isticmaalaa dhererka dooxada oo dhan oo ay kujirto xaafadaha sida Magaalada Columbia iyo Rainier Beach. Deggeneyaasha Coast Salish waxay ku lahaayeen raad-reeb soo jireen ah dooxada oo dhan iyo guryo dhawr ah oo kala jiidan oo leh geedka sidaar (cedar) oo ku yaala xeebaha harada. Dadkii aan Hindida ahayn ee degey meeshu waxay soo galeen 1850kii laakiin deegaanadu way gaabinayeen ilaa kayntii looxa ahayd ee waawaynayd ee dooxada la jaray laguna googooyey mishiinka alwaaxda deegaanka. Jidka Tareenka Korontada Rainier Avenue, oo laga dhisay jidka maanta Rainier Avenue S, ayaa u furay dooxada dhisidda daafaha magaalada iyo markii dambe magaaleynta meeshaba. Khadka tareenku wuxuu gaadhay Magaalada Columbia 1891 Renton-na 1896 wuxuu ahaa isku xidh muhiim ah ilaa laga baxay 1937. Rainier Valley waxay inbadan hooy u ahayd muhaariin badan, oo Talyaani Maraykanka iyo Jabbaaniis Maraykanku ugu badnaayeen kahor Dagaalkii labaad ee Adduunka (iyada oo goobjoog u aheyd karantinimeyntiijabbaaniiska Maraykanka noqday). Wakhtiyadii dhaqaale koboca ee lagu jiray ama ka dambeeyey dagaalku waxay keeneen deggeneyaal badan. Afrikaanka Maraykanka ah ayaa ka soo guurayey gobol kale iyo Badhtanka Seattle. Baryahan dambe, mawjado cusub oo muhaajiriin ah oo ka yimid Koonfurta Maraykanka iyo koonfur-bari Eeshiya ayey Rainier Valley hoy u noqotay.